QARAXII SOOBBE: 11-kii daqiiqo ee uu Ilaahay igu badbaadiyey! (Sheeko cabsi leh) | Hadalsame Media
Home Maqaallada QARAXII SOOBBE: 11-kii daqiiqo ee uu Ilaahay igu badbaadiyey! (Sheeko cabsi leh)
QARAXII SOOBBE: 11-kii daqiiqo ee uu Ilaahay igu badbaadiyey! (Sheeko cabsi leh)
(Hadalsame) 14 Okt 2021 – 11-kii daqiiqo ee uu Ilaahay igu badbaadiyey!
Waa maalin sabti ah, 14-ka Okt 2017-kii, waxaan si KMG ah u daganahay aagga Macruuf, Buulo Xuubeeyey, degmada Wadajir!
Maadama aan subixii 9am aan lahaa xiisad hore, waxaan ka soo quraacday maqaayad ku taalay dabaqa Zoobe qeybtiisa hoose, kaddib waxaan soo aaday xarunta Jaamacadda ee Yusuf zal-Kowneyn.
Waxaan maanka ku hayaa marka laga yimaado xiisadaha, kulan ciyaareed xiiso badan oo ka tirsan English Primier League, kaas oo u dhexeeyey Manchester United iyo Liverpool, waxa ay soo galeysay 2:30 🕝 waa xilliga ay dhammaaneyso xiisadda ii bilaabaneysa 1pm.
Maalintaas waxaa isku xirnaa ama ciriiri aad u baaxad weyn uu ka jiray laga bilaabo laami yaraha Zoobe ilaa iyo Isgoyska Banaadir meel u dhaw.
Waa qaraxii Zoobe, dhawr maalmood ayey igu qaadatay in aan maskaxiyan ka soo kabto argagixi aan ka qaaday iyo suuraysashadii inta aan u jirsaday.
Previous articleUEFA oo debacday & kooxaha waawayn oo loo ogolaaday in loo kordhiyo lacagaha kasoo gala CL (Goorta la bilaabayo?)
Next article”Dadka ku baaqaya dagaal Somalia lala galo ma aha dad dagaal yaqaanna!” – Dood kulul oo ka dhacday Aqalka Sare ee Kenya (Daawo)